सरकारले खोल्यो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा तर यस्ता छन् नयाँ नियमहरु – Enepali Samchar
सरकारले खोल्यो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा तर यस्ता छन् नयाँ नियमहरु
June 9, 2021 adminLeaveaComment on सरकारले खोल्यो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा तर यस्ता छन् नयाँ नियमहरु
e nepalisamchaar // काठमाडौं l कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका नियमित उडानहरुमध्ये सरकारले सिमित गन्तव्यमा खोल्दै गएको छ। टर्की, चीन र कतारका लागि सिमित नियमित उडान खुला गर्ने सरकारी निर्णयअनुसार आजदेखि कतारको दोहामा उडान सुरु भएको छ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि भारत बाहेकका गन्तव्यमा बैशाख २३ गतेदेखि नियमित उडान बन्द गरिएको थियो। भारतको नयाँ दिल्लीमा भने एयरबबल सम्झौताअनुसार हप्तामा दुई उडान जारी रहेको छ।
वैशाख २० गतेदेखि टर्कीको इस्तानबुलमा साताको एक उडान अनुमति दिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कतारको दोहाका लागि २ उडानको अनुमति दिएको छ। काठमाडौं-दोहा का लागि कतरा एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्सले प्रत्येक सोमबार १/१ उडान गर्ने छन्।
नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गन्तव्यहरुमा नियमित उडान खोल्न माग भएपनि सरकारले अहिले कतारका लागिमात्र खुला गरेको छ। साउदी अरबमा उडान प्रतिबन्ध रहेको तथा अरु गन्तव्यमा पनि सहज नभएकाले तत्काल कतारका लागिमात्र उडान खोलिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
अहिले कतार उडान खुला भएपनि कतार हुँदै अरु देशबाट पनि यात्रुहरु आउन पाउने छन्। त्रिभवुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप तिवारीका अनुसार कतार हुँदै अरु देशमा रहेका नेपालीहरु पनि आउन पाउने छन्।
साउदी अरब,युएई लगायतका देशबाट कतार हुँदै नेपाल आउनमा रोक नभएको उनले जानकारी दिए। ‘हामीले नियमित उडान खोलेको हो। यसमा कुनै गन्तव्य तथा राष्ट्रियताको आधारमा रोकतोक हुने छैन। सिमित उडान भएकाले टिकट उपलब्धताका आधारमा यात्रुहरु आउनसक्छन्’ उनले भने।
नेपाल आउँदा केके छन् नियम?
विदेशबाट नेपाल आउनेका लागि न्यूनतम नियमहरुमध्ये अनिवार्य कोरोना परीक्षण नेगेटिभ भएको पिसिआर रिपोर्ट(फोटो र बारकोडसहितको), नेपाल आएपछि आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम छन्।
१. पछिल्लो ७२ घण्टाको फोटो एवं बारकोड/ क्युआर कोडसहितको पिसीआर रिपोर्टमा कोभिड नेगेटिभ रहेको चाहिन्छ। २ नेपाल आएपछि १० दिन अनिवार्य होटलमा क्वारेन्टिन बस्नुपर्छ।
तर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुका लागि भने पाँच दिनमात्र क्वारेन्टिन बसे पुग्छ।३ १० दिन होटल क्वारेन्टिन बसेपछि आफ्नै खर्चमा कोरोना परीक्षण गर्नुपर्छ।कोभिड रिपोर्ट पोजेटिभ आएमा कम्तीमा १० दिन कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले तोकेको आईसोलेसन सेन्टर वा तोकिएको अस्पताल वा होटल आईसोलेसनमा अनिवार्य बस्नुपर्छ।
४ क्वारेन्टिन बसेर कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि यात्रुले आफ्नो घर जान पाउने छन्। ५ हवाई उडानबाट नेपाल आएका यात्रुहरुलाई क्वारेन्टिनका लागि होटलसम्म लैजाने, सम्बन्धित यात्रुहरु १० दिनको होटल
क्वारेन्टिनमा बसे नबसेको अनुगमन गर्ने, होटल क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरु विरामी भएमा उपचारको व्यवस्था गर्ने, १० दिनको होटल क्वारेन्टिन पूरा गरेका व्यक्तिहरुलाई गन्तव्य स्थानसम्म जान सहजीहरण सिसिएमसीले गर्ने छ।
६ आफन्तको अन्तिम संस्कार (काज क्रिया) मा सहभागी विदेशबाट नेपाल आउनेलाई भने होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने छैन। उनीहरुलाई स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा १० दिन घरमै क्वारेन्टिन बस्नेगरी घर जाने व्यवस्था मिल्ने छ।
७ विरामसँग आएका कुरुवा (हेरालु) को हकमा अस्पतालबाट घटना पुष्टि हुने कागजात र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा कम्तिमा १० दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी घर गन्तव्यमा जान अनुमति दिइने छ।
८ ७५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, ५ वर्ष भन्दा मुनिका नाबालक र नाबालकसंगै आएका आमा र बाबुको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा कम्तिमा १० दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी घर / गन्तव्यमा जान पाइने।
९ विमानस्थलदेखि होटलसम्म, होटलदेखि गन्तव्यसम्म जानका लागि यातायातका लागि स्थानीय प्रशासन तथा सिसिएमसीले सहजीकरण गर्ने। यसको खर्च भने यात्रुले नै तिर्नुपर्ने छ।
के नेपाली सेनाले देशको नेतृत्व लिन सक्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानसेनापति थापाले दिए यस्तो जवाफ ! सबै परे चकित
अब असारदेखि लकडाउन होइन, लुजडाउन ! के के गर्न पाइन्छ त पूरा हेर्नुहोस
यस्तो छ पुरानो लुक्समा आधुनिक फिचर भएको ‘जावा’ बाइक (वर्षमा दुई पटक मात्र सर्भिसिङ गरे पुग्ने)
बैतडी बस दुर्घटना अपडेट : मृ*तक र घाइते सबैको पहिचान खुल्यो (नामसहित)